निर्मला प्रकरण: तीन जना अफिसरले 'डूब अचम्म' - Khabar Time
निर्मला प्रकरण: तीन जना अफिसरले ‘डूब अचम्म’
काठमाडौं, काठमाडौं। उच्च अधिकारीहरूको भूमिकाबारे अहिलेसम्म कुनै उल्लेख छैन जुन अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष निर्देश र विनियमन गरेको छ, जसले अभियोग विरुद्ध कारबाही गरेको प्रहरी टोलीले सस्पिन्टन्टेंट अफ द पुलिस (एसपी) लाई सिफारिस गरेको छ। ), पुलिस मुख्यालय द्वारा बनाई गई नर्मला पंत हत्या को मामला मा पुलिस को भूमिका को अध्ययन गर्न को लागी।
निचला स्तरका अधिकारीहरु द्वारा लिइएको कार्य अनुसार, समितिको नेता अतिरिक्त निरीक्षक जनरल (एआईजी) को नाम ‘ओभानो पानीमा’ भनिन्छ।
पुलिसको भूमिकाबारे अनुसन्धान समितिको संयोजक, बसयास (उस समय, डीआईजी) अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा निर्मललाल हत्याका अभियोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कानुनपुरबाट घटनाक्रममा उनी प्रगतिको बारेमा नियमित रूपमा झन् झन् झन्झन्डा लगाइरहेका थिए।
त्यस्तै, केन्द्रीय रिसर्च ब्यूरो (सीआईबी) को प्रमुख महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह खड्का, उपाध्यक्ष उप पुलिस महानिरीक्षक, एसएसपी, विक्रम चन्द्र, जिल्ला7को साथमा शुरु भएको “पर्यवेक्षक” को रूपमा घटना को जांच पनि गरेको थियो। ।
अनुसन्धानमा मलमण्डल द्वारा संचालित क्रियाकलापको निरीक्षण र विनियोजन गर्ने जिम्मेवारी पुलिस जाँच निरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल एसएसपी चन्द्र सम्म एसएसपी चन्द्र, त्यसपछि अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुख हो। तथापि, अनुसन्धान समिति को रिपोर्ट मा, ‘अधिकारियों’ को भूमिका, जिम्मेदारी र जिम्मेवारी को बारे मा कुनै चर्चा छैन। बरु, यो लुकेको छ र फ्लो स्तर स्तरका अधिकारीहरूको लागि उत्तरदायी छ।
यदि कुनै घटना सफल भएमा, अनुसन्धान ‘अधिकारी’ जस्तै हो। तथापि, जब कमजोर हुन्छ, फ्लोर स्तरका अधिकारीहरू मात्र फराकिन्छन्। यसले पुलिस संगठन भित्र असफलताको स्रोत बताउँछ।
अपराध सम्बन्धी अपराध अनुसन्धानमा पोखर नेपाल नेपाल पुलिसको एक पुलिस अधिकारीले अनलाईन वार्तालापलाई अनलाइन अनलाईनसँग प्रश्न गरे, “किन सबै सुपर अफिस अधिकारीहरूले पर्यवेक्षकहरूलाई जिल्ला प्रमुख र अनुसन्धान अधिकारीको टाउकोमा राख्नुपर्छ?” राज्य पुलिस कार्यालय किन छ? जिल्ला र मुख्यालय कहिले मात्र?
उनले त्यस्तो गलती गरेपछि टोलीले निमला हत्याको आरोपमा पुलिसको लापरवाहीको खोजी गर्न गठन गरेको छ, कम अधिकारीहरूलाई मात्र दोष देखाउँछ।
‘कमान्ड चेन’ मा चलिरहेको प्रहरी संगठनमा सुपरइन्टेंट्रेन्ट (एसपी) र फ्लो स्तर स्तरका अधिकारीहरूको संलग्नतामा नक्कली आरोप लगाउन सम्भव छ? अन्वेषकहरू किन “झूटा झूले” परीक्षण पठाउनका लागि नकली आरोपहरू उठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? आरोप किन फेरि आधारमा रिहा गर्न सकिन्छ? प्रहरी संगठनले यस्तो प्रश्न उठाउँदै गरेको छ।
कसको काममा छ? चार्ज के हो?
समितिको गठन गर्न समितिले गठन गरेको सिफारिसको लागि 18 पुलिस अधिकारीलाई दोषी ठहराउन सिफारिस गरिएको थियो।
प्रहरी निरीक्षक जनरल (आईजीपी) सुरेन्द्र सिंहललाई प्रहरी कार्यालयमा पठाएको प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको थियो, त्यसका साथै कानुनपुर पुलिस प्रमुख एसपी दलितराज बिस्टा, प्रहरी महानिरीक्षक पुलिस (डीएसपी), जीएसपी सहित कानुनपुर पुलिसका प्रहरी बहादुर भण्डारी, प्रहरी निरीक्षक, जगदीश भट्ट, एकेन्द्र खड्का र गणेश सापकोटा थिए।
त्यसैगरी, प्रहरी सहायक निरीक्षक (साई) राम सिंह धमी, वासुदेव अवस्थ, हररङ धामी, डिकन्ददेव पन्त, हवलदार धर्ममन्द सिंह भट, दीपक बिस्ता र पुलिस कर्मचारीले लालबहादुर बिष्ट, महादेव खत्री, सुवेन्द्र सिंह कुन्वर, चन्द्रनी शाह र सरजराज महताारालाई सिफारिस गरेका छन्। । ।
तीमध्ये, एसपी भित्ता र प्रहरी निरीक्षक भट्ट डार्करेर्हे, बेपत्ता भएका छन्। तिनीहरूलाई अनुसन्धानमा लापरवाहीको आरोप लगाइएको छ।
समितिले भनेका छन् कि उनीहरूको विरुद्धमा लिखित समितिको विफलता 10 दिनसम्म राखीएको समितिको असफलताको कारणले गर्दा एसपीलाई ‘अपराध सी’ मा राखिएको छैन, घटनालाई सुरक्षा नगर्ने, प्रमाणको रक्षा गर्न, र प्रयोग नगरेको छैन। कुकुर, र व्यभिचारलाई छोडेर।
उच्च अधिकारीहरू कहाँ छन्?
राज्य प्रहरीले जिल्लामा क्रियाकलापको निरीक्षण, नियामक र निर्देशन निर्देशन गर्न जिम्मेवार छ। दिनभर नैर्मला पन्तको शरीर भेट्टाउन स्थानीय स्तरमा स्थानान्तरित भएको थियो।
बीएसपी विक्रम चन्द्रले घटनाको अनुसन्धानको बारेमा प्रत्येक गतिविधिको बीफिंग स्टेटका उप महानिदेशकको नेतृत्व गरिरहेका थिए। राज्य अधिकारीहरूले अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख कार्यकर्ताहरू बेवास्ता गर्छन्। अपराध अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीले घटनाबारे जानकारी दिन सक्छ।
जब अनुसन्धानको समस्या चिन्ता छ, राज्य प्रहरीले अपराध अनुसन्धान विभागको सहयोग माग्न सक्छ। तथापि, यो स्पष्ट छैन कि आजादी को शक्ति वा छैन।
“मिस डर्न्स” को घातक अपराधको अनुसन्धानमा अनुसन्धान गरिएको छ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको जिम्मेवारी यसलाई सही दिशामा ल्याउनु हो। त्यहाँ प्राविधिक सहयोगको ब्यूरो पनि छ। त्यसैले, ब्यूरो आफैलाई अनुसन्धानको साथ हस्तक्षेप गर्न छैन।
घातक अपराधको घटनामा मृत शरीर फेला पारेपछि 27 पदाधिकारीलाई प्रहरी कार्यालय पठाइएको छ। उहाँ अपराध अनुसन्धान विभागलाई पनि जान्नुहुन्छ। त्यसपछि पुलिस निरीक्षक को रिपोर्ट। र, घटना को प्रकृति मा विशेष नौकरशाही पठाउन को लागि, या आईजीपी सीआईबी टीम हुनेछ।
प्रहरी स्वतन्त्रताको दावीमा यो प्रक्रियाको लागी संदिग्ध देखिन्छ। शरीर भेटिए दुई दिनपछि पुलिस मुख्यालयले कानुनपुरलाई डीएसपी गुरु जीसी, सीआईबीको नेतृत्वमा टोलीलाई पठाएको छ।
CIB टीम पूंजी बाहिरको अपराधको कुनै पनि अनुसन्धानबाट पूर्णतया निःशुल्क छैन। उनको काम केवल टेक्निकल सेन्टरमा जिल्लालाई सहयोग गर्नको लागि मात्र हो। यो जिल्लालाई सडक अनुसन्धान गरेर जिल्लालाई दिने तिनीहरूको कर्तव्य हो। त्यसपछि CIB ले अन्य प्रक्रियाहरूको ‘मनिटर’ गरिरहेको छ।
केही अवस्थामा, CIB ले राजधानीमा हुने दाँयामा यो मामला लिइसकेको छ। यद्यपि, घटनामा जिल्ला पुलिस अफिसको अवस्थामा, CIB पूर्ण रूपमा मुक्त छैन।
यस घटनामा, यहां सम्म कि अधिकारीहरु सीआईजी प्रमुख डीआईजी नारायण सिंह खड्का को जांच को लागि आवंटित गरे, यस घटना को 5/6 पटक एआईजी बनाथ को नेतृत्व को बयान दिए।
शोधको घटना हेर्नुहोस्:
नर्मला मामला मा समाचार प्राप्त गरे पछि, स्थानीय स्थानीयहरु को दबाव जनता को आरोप मा बढाया।
आक्रमणमा गिरफ्तार गरिएको दिलिप सिंह बिस्टा, हिरासतमा पाईएन। फेरि, जब अदालत एक समय सीमा जोड्न को लागी, राखिएको मुद्दा एक गुप्त मामला थिएन। यस अवस्थामा, अनुसन्धान अनुसन्धान अधिकारीहरूको टोली सीआईआई प्रमुख खड्काले भने।
त्यसपछि अपराध अनुसन्धान अनुसन्धान विभाग, बसन्त को मुख्य न्याय, पुलिस निरीक्षक र अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शीर्ष अधिकारीहरु संग छलफल गरिएको छ। अन्तमा, उनीहरूको निर्देशनमा, प्रहरीले निष्कर्ष निकाल्छ जुन डिलिप सार्वजनिक गर्दछ।
कंचनपुरमा एक प्रेस कन्फिगरेसनको लागि तयारी गर्दा, जिल्लाका अधिकारीहरूलाई सीआईबीका प्रमुख खड्का पठाइयो, साथै प्रेस विज्ञप्तिको मस्यौदामा। कुन शब्दहरूमा उहाँ बारम्बार बाहिर निस्कनुभयो।
तथापि, प्रहरी अनुसन्धान अनुसन्धान रिपोर्ट उनीहरूको भूमिकाको बारेमा चुस्त छ।
राज्य पुलिस र ‘ए.ए.’ विभागको जिम्मेवारी के हो?
Kanchanpur मा गोली मारने पछि, एसएसपी को चाँद को स्थान मा पुग्यो थियो। यो आन्दोलन अर्को दिनबाट सुरु भएको थियो।
तबसम्म सबै प्रमाण र प्रमाणहरू नष्ट भएन। तर अधिकारी के गरे? तपाई को गर्दै हुनुहुन्छ वा के यो मुद्दा पछ्याउनु भयो?
किन देखिएन किन अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख एआईजी बसना, कुकुर को उपयोग गरेर घटना को समयमा प्रयोग गरेको छ जब शोध अधिकारी को घटना मा कुत्तों को दोषी पाया। तपाइँ किन कुकुरहरूलाई निर्देशन दिनुभएन?
गुप्तालाई उक्त घटनामा अभियुक्तको आरोप लगाइएको थियो। यसको लागि खोजी गर्न लागेन? 3/4 दिन पछि नग्न लुगा लगाइएको छ। के उनले त्यस स्थितिलाई सुरक्षित गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए?
किन एआईजी बसन्तले टीमलाई रोक्न सकेन भन्ने प्रमाणको निष्कर्ष निकालेको थिएन कि दिलिप सिंह बिस्ताले प्रमाणपत्र बिना सार्वजनिक घोषणा गरे? डीएनए रिपोर्ट पहिलो पटक किन आयो? रिपोर्ट आफैमा उठाइएको यी प्रश्नहरूको जवाफ दिइन्छ।
अनुसन्धान अधिकारीहरु संग अनुत्तरित प्रश्नहरु को प्रश्न को जांच गर्दा, राज्य पुलिस विभाग को अपराध अनुसन्धान विभाग उन विषयों मा चुप थियो।
सम्भवतः राज्य कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग र पुलिस मुख्यालयको सहमति बिना बिस्ता प्रचार गर्न सम्भव छ? यो प्रश्न पनि विचार गरिएको छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूले आफैलाई स्वीकार्छन् कि जब सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक धारणाको प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धानलाई सार्वजनिक रूपमा उठाइरहेछ र भलाकुमारीले आफ्नो जीवन गुमाए।
अतीतको केहि गम्भीर घटनाहरु मा, पुलिस निरीक्षक को पनि निर्देशकहरुलाई निर्देशित गर्न को निर्देश दिए छ। प्रहरी निरीक्षक जनरल पुलिसको भूमिका के थियो, जसले आफ्नो इस्तीफा माग गर्न को लागी एक संदिग्ध व्यक्ति को बयान ले लिया? के उहाँले यसको बारेमा बोल्नुभयो वा होइन? उहाँले आफ्नो अनुहार गुमाउनु भएको छैन।
अनुसन्धानमा, शोधका संदिग्ध व्यक्तिहरूको प्रमाण देखाइएको प्रमाण ल्याउनु हो। कुनै सबूत छ कि प्रमाण हराउन सक्छ जब प्रमाण नष्ट हुन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रमाण ‘क्षेत्रीय स्वाव’ सुरक्षित राख्नु हो। र, यो पनि प्राकृतिक मामला मा मुख्य प्रमाण छ। तथापि, बानाट नेताको नेतृत्वको रिपोर्टले सबै तहका अधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको स्तर हटाउन सुरु गरेको छ, र अब शोधकर्ताहरू अपराध अनुसन्धानमा अपराध खतरामा परेका छन्।
ओआईआईले सीपीआई-एम बैठकमा जवाफ दिए: मान्छे विश्वस्त छन् र पार्टीको आलोचना गरिएको छ